ဂန္ထဝင်စာချစ်သူတွေပြောတဲ့ Single ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ- အပိုင်း (၂) | ဂန္တ၀င်
Home ခံစားမှုရသ ဂန္ထဝင်စာချစ်သူတွေပြောတဲ့ Single ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ- အပိုင်း (၂)
ဂန္ထဝင်စာချစ်သူတွေပြောတဲ့ Single ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ- အပိုင်း (၂)
” Single ဖြစ်ဖို့ ကျုပ်လိုရုပ်ရည်နဲ့ လွယ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ အပြင်တစ်ခါထွက်ရင် ရုပ်ဆိုးဆေးတစ်ဒါဇာလောက် ထွက်ရတယ်။ ဒါတောင်နောက်ကလိုက်ဗျာတကယ် မနိုင်ဘူး။ မနေ့ကဆိုအိမ်ရှေ့ဂစ်တာလာတီးတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ရက်ကွက်လူကြီးဖုန်းဆက်တိုင်ရတယ်။ ဟူး… Single ဖြစ်ရတာနည်းတဲ့ စကေးတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ အခု c… b.. က friတွေလည်း Single ဘဝကိုအားမငယ်စေချင်ဘူး။ သဘာဝတရားကိုမလွန်ဆန်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်တော့ပြုမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရွေးချယ်နေလို့ single ဘဝလေးနဲ့ပျော်မွေ့နေသူ…ဟီး.. အမျိုးသမီးထုကတော့ မာန့်ကိုဆဲနေမလားပဲ… အားလုံးပျော်ပါစေ။-ခေတ္တလူ့ပြည်
Single ဘဝကြီးကတကယ်တော့ ကောင်းလည်းကောင်းတယ်။ မကောင်းလည်းမကောင်းဘူး။ လွတ်လည်းလွတ်လပ်တာတော့မှန်တယ်။ တစ်ခါတလေတော့လည်းအထီးကျန်သလိုဖြစ်မိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်နေပေမယ့်လည်းအချိန်တန်တော့ သူတို့ရည်းစားတွေနဲ့ပါသွားတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲကျန်ခဲ့တယ်။ အားငယ်စိတ်ဝင်ရော။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ မိသားစုရှိသေးလားဆိုတဲ့အသိစိတ်ကြောင့် ပြုံးလိုက်မိပြန်ရော။ အဲ့ဒါကြောင့် single ဆိုတာအကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေတယ်လို့ ခံယူထားတယ်။ ” – Minkhakyal
” Single Life ကတော့ ပုံမှန်ကြည့်ရင် အရမ်းအေးချမ်းတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်လည်းအေးချမ်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့ မအေးချမ်းမသာယာနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတလေကိုယ့်ရဲ့လက်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးဆုပ်ကိုင်ပေးမယ့် အခိုက်အတန့်တော့ လိုချင်ကြတယ်။ ဒါကတော့ ဆန္ဒတစ်ခုပေါ့လေ။ တစ်ယောက်တည်းနေရတာကောင်းပါတယ်။ ဘယ်သွားသွားဘာဘလုပ်လုပ် အရမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ အဆင်ပြေတယ်။ အနှောင်အတွယ်တွေမရှိဘူး။ ဘာအကြောင်းအရာတွေကိုပဲလုပ်လုပ်နှစ်ယောက်စာမစဉ်းစားရဘူး။ နောက်ဆံမတင်းဘူး။ စိတ်ထဲအေးချမ်းပါတယ်။ Single life နဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သဘောကျရတာလဲပျော်ရွင်စရာကောင်းပါတယ်။ အရာအားလုံးငြိမ်းချမ်းပါတယ်။ ” – Just Da Peace- Pan Ei
” Single ဖြစ်ရတာ
No.1 ငွေကုန် ကြေးကျသက်သာတယ်။ bill ကုန်သက်သာတယ်။ VdayAnni Day, Birthday Day ပေါင်းများစွာရဲ့ လက်ဆောင်ပေးရတဲ့ စရိတ်သက်သာမယ်။
No.2 လူမှုရေးကောင်းတယ်။ သဝန်တိုမယ့် ငြူစူမယ့်ချစ်သူမရှိတော့ ဘော်ဒါတွေကိုအချိန်ပေးနိုင်မယ်။ ဘာပွဲဖိတ်ဖိတ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရမယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ group trip ထွက်မလားအေးဆေးပဲအိမ်ကိုပိုင်ရင် ဂေါ်လီလုပ်ရုံပဲ။
No.3 စိတ်ကူးယဉ်နိုင်တယ်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လားအလန်းလေးတွေကအစ နိုင်ငံကျော်တွေ၊ ကမ္ဘာကျော်တွေအထိစိတ်ကူးယဉ်နိုင်တယ်။
No.4 ချစ်သူကိုအချိန်ပေးစရာမလိုတဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မယ်။ မိသားစုကိုအချိန်ပေးနိုင်မယ်။ ဘာသာရေးတွေပိုလုပ်ဖြစ်မယ်။
No.5နောက်ဆုံးချစ်သူအပေါ်စိတ်မချရတဲ့ ဒုက္ခ၊အပူအပင်၊ ဒေါသတွေ ကင်းတဲ့အတွက် Single လေးသင်ဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ နုပျိုလှပ smart ကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်။” – PyoPyoKhinMadi
No. တကယ်ပါ singleဘဝကပျော်ရွှင်မှုအစစ်တွေနဲ့ အကျိုးရှိရှိကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့ အချိန်ပါ။ စာအုပ်တွေဖတ်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်တယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေ၊ အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိလာရင် ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်းအစစ်အချို့နဲ့ ရင်ဖွင့်တယ်။ သီချင်းအသစ်တွေထွက်တိုင်းနားထောင်ဖြစ်တယ်။ သီချင်းဟောင်းတွေကလည်းတကယ်ကိုကိုယ့်အတွက် အဖော်ရပါတယ်။ အလုပ်ကိုလည်းတစိုက်မတ်မတ်လုပ်နိုင်တယ်။ အဲ့ဒီအတွက် single ဘဝကိုကျေနပ်စွာနဲ့ပဲဖြတ်သန်းနေပါတယ်။-Daw Ni NiTun
“Single ဖြစ်ရတဲ့ အားသာချက်ကတော့ လွတ်လပ်အေးချမ်းစွာအချုပ်ချယ်ကင်းမဲ့ပြီးမိဘတွေကိုအပူအပင်ကင်းစွာနဲ့ ပြုစုလုပ်ကျွေးခွင့်ရတယ်။ ပူလောင်ပြင်းပြတဲ့ ခံစားချက်တွေမခံစားရဘဲပေါ့ပေါ့လန်းဆန်းပြီးအမြဲတမ်းအေးချမ်းနေမှာပေါ့။” – Suzan Phoebe
” ချစ်သူများနေ့ဆိုတာကိုယ်ချစ်တတ်သူတွေအားလုံးနဲ့ ဆင်နွှဲလို့ရတယ်။ နေ့တစ်နေ့လို့ထင်တာပဲချစ်သူရှိတယ်။ လူပဲပျော်ရွှင်နေသလိုချစ်သူမရှိတဲ့သူတွေလည်းကိုယ်ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်လို့ရတာပဲလေပိုလို့တောင်ပျော်စရာကောင်းနေသေးတယ်။” – Khin Yu Mon
Previous articleကမ္ဘာကြီးကို တိုးတက်ပြောင်းလဲစေခဲ့သော သမိုင်းဝင်တီထွင်မှုများ
Next articleသူတစ်ပါးအကျိုးဆောင် ကိုယ့်အကျိုးအောင်ဆိုတာကို သက်သေပြသွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်